Fanabeazana · Marsa, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Fanabeazana · Marsa, 2011
Novambra 2015 8 Lahatsoratra
Aogositra 2015 5 Lahatsoratra
Aogositra 2012 10 Lahatsoratra
Jolay 2012 9 Lahatsoratra
Marsa 2011 8 Lahatsoratra
Tantara mikasika ny Fanabeazana tamin'ny Marsa, 2011
Brezila: Adihevitra manodidina ny boky ho an'ny ankizy manavakava-bolonkoditra
Amerika Latina 27 Marsa 2011
Eo am-pamakiana ity lahatsoratra ity, maninona moa raha mba mihaino ihany koa ny hira Yellow Woodpecker's Ranch (Sítio do Pica-Pau Amarelo) [pt], feonkira mahazatran'ny tantara mitohy amin'ny fahitalavitra Breziliana nalaina tamina bokin'ny ankizy nosoratan'i Monteiro Lobato. Hira noforonin'i Gilberto Gil, azo henoina ao amin'ny tranonkalan'ny mpanakanto. Tsindrio eto handefasana ny raki-kira amin'ny varavarankely...
Venezoela: Mianatra mitendry Gitara ao amin'ny tranokala 2.0
Amerika Latina 25 Marsa 2011
Ny gitara no sary masina lehibe amin'ny mozika nenti-paharazana Venezoelana. Tamin'ny voalohany no nianarana azy matetika ary miaraka amin'ny ankamaroan'ny hira mitantara ny hira vako-drazan'ny firenena. Mety amin'ireo bàn-kira isan-karazany ny gitara, miaraka amin'ny ampongamaroanaka avy any amorotsiraka, ny mozika calypso avy any atsimo. Matetika mampiasa gitara ny amboaram-peo nentim-paharazana, manao...
Arabia Saodita: Nampanantena Volabe Ny Saodiana Ny Mpanjaka
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 20 Marsa 2011
Volabe no nampanantenaina ny Soadiana androany (18 Martsa 2011), taorian'ny teny nataon'ny Mpanjaka Abdulla ho an'ny firenena. Tanatinà teny fohy, ilay Mpanompon'ireo Trano Masina Fivavahana roa dia nisaotra ireo mpisorona, ny mpanoratra ary ny Ministeran'ny Atitany noho ny ezaka nataon'izy ireo hiarovana ny fanjakana. Filazàna sy didim-panjakana avy eo no nanaraka fa hoe volabe an-davitrisa no hatondraka ho an'ny Saodiana.
Fizaran-doka no manamarika ny andron'ny vehivavy erantany ao Ganà
Afrika Mainty 16 Marsa 2011
Isan-taona manerana izao tontolo izao no ankalazana ny Andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy ny 8 martsa. Hetsika an-jatony no hita tsy tamin'io andro io ihany fa nandritra ny volana martsa mba hanamarihana ny zavabitan'ny vehivavy teo amin'ny sehatra ara-toe-karena, politika ary sosialy. Tsy namela io andro io handalo fotsiny i Ganà sy...
Amerika Latina 07 Marsa 2011
Libanona: Fihetsiketsehana manohitra ny rafitra mifototra amin'ny sekta
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 07 Marsa 2011
Mihoatra ny 2500 ny Libaney nanao diabe tamin'ny alahady (27 Febroary 2011) tao an-drenivohitra Beirut manohitra ny rafitra miankina amin'ny sekta izay heverin'izy ireo ho fototry ny olana ao amin'io firenena io. Ato no hahitantsika hoe tahaka ny ahoana ny fihetseham-pon'ny Libaney an-tserasera. Efa misy koa ny miomana hanao fihetsiketsehana ny 5 Marsa.
Bahrain: ‘Nanapoaka Sarom-bilany’ Hanohitra Ny Sekoly (Lahatsary)
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 04 Marsa 2011
Sekoly Ambaratonga (ambony) faharoa maromaro no 'nanapoaka sarom-bilany' hihetsika hanohitra ny governemanta manerana an'i Bahrain tamin'ny Talata 1 Martsa. Ho fanohanana ireo mpanao fihetsiketsehana milasy ao amin'ny Fihodinana ao Pearl (Lulu) dia nivoaka ny sekoliny daholo teny anelanelan'ny andro fianarana, na lahy, na vavy, ka nanao filaharana teny ivelan'ny sekolin-dry zareo tao an-tanànan'i Isa , Hamad ary Jidhafs.